Bearish on Blogs | Martech Zone
NgoLwesithathu, July 5, 2006 NgoMgqibelo, Ephreli 16, 2016 Douglas Karr
INews.com - Bearish kumaBlog
Forbes.com - Ibhola leMySpace
Amanothi ambalwa athakazelisayo ngokuqhuma kwamabhulogi. Njenganoma iyiphi i-'bubble ', abantu sebevele bakhuluma' ngokuqhuma '. Engikuthathayo ukuthi uNick Denton akatholi 'ama-bearish kuma-blogs', uthola i-bearish kumabhulogi amabi njengomthombo wemali engenayo. Amabhulogi azoqhubeka nokukhula ngokuhamba kwesikhathi futhi ahlanganiswe kuzo zonke izici zewebhu. Kodwa-ke, njenganoma iyiphi iwebhusayithi, okuqukethwe kufanele kube yinkosi. Uma ungabhali kangcono kunomfana olandelayo, abantu bazobhoreka futhi bahambe.
Izinkampani ezinjengoMnu Denton ezisebenzisa amabhulogi njengomthombo wemali, lokhu kusho ukuthi konke ukungena kwebhulogi kudinga ukuba ngumbulali. Kukhona ubungozi obukhulu obubandakanyeka emalini yokugembula yokuqukethwe - ikakhulukazi uma kunamakhasi ayizigidigidi wamakhasi wokuqukethwe laphaya.
Angiyibhaleli imali (angizukudla uma ngenzile). Esikhundleni salokho, ngibhuloga ukuxhumana nabangane, umndeni, nabanye ochwepheshe bemboni. Le yindawo kimi yokwabelana ngemicabango yami futhi ngixoxe ngemicabango yabanye abantu. Kunginikeza ukuvezwa futhi ngicela impendulo kulabo engibahloniphayo.
Tags: I-bearish kuma-blogsblogibhulogiforbesMySpacenick dentonibhamuza le-myspace